Nifanenjehana teny Andohatanjona Itaosy: maty voatifitra i Tidakely, naka an-keriny an’i Aleck | NewsMada
Nifanenjehana teny Andohatanjona Itaosy: maty voatifitra i Tidakely, naka an-keriny an’i Aleck
Lavon’ny balan’ny polisy teny Andohatanjona Itaosy, omaly, i Tidakely. Anisan’ny tompon’antoka tamin’ny fakana an-keriny an’ilay teratany karana Own Aleck tany Toamasina izy io.
Lavon’ny balan’ny polisy teny Andohatanjona, omaly tokony ho tamin’ny 6 ora maraina i Tidakely, jiolahy isan’ny nanao ny fakana an-keriny an’ilay teratany karana Owne Aleck sy i Luciano tany Toamasina. Araka ny nambaran’ny polisim-pirenena, nahazo angom-baovao izy ireo ny volana febroary teo, izay nilaza fa any Toamasina io jiolahy io. Nidina teny an-toerana ny polisin’ny BC ka tra-tehaka tamin’izany i Tidakely, tamin’ity volana marsa ity ihany. Taorian’izay, noentina teto an-drenivohitra ny lehilahy ary nanaovana famotorana. Nanambara anefa ity farany fa misy namany, miara-miasa aminy amin’ny fanaovana asa ratsy eny Andohatanjona Itaosy. Vokany, nidina teny an-toerana niaraka tamin’i Tidakely ny polisim-pirenena, omaly maraina hitady an’ilay olon-dratsy. Tao anatin’izay anefa, namaly tamin’ny fomba feno herisetra an’ireo polisy niambina azy i Tidakely ary nanararaotra nandositra avy hatrany. “Nanao tifi-danitra ny polisy mba hampijanonana azy, saingy nitsoaka ihany ilay jiolahy”, hoy ny loharanom-baovao. Voatery nampiasa ny fitaovana teny am-pelatanany hampijanonana azy izy ireo ary nitifitra an’i Tidakely. Vokany, naratra mafy tamin’izany io jiolahy io ka noentina teny amin’ny hopitaly etsy Ampefiloha. Tsy tana intsony anefa ny ainy taorian’izay ary etsy amin’ny tranom-patin’ny HJRA ny vata-mangatsiakan’i Tidakely, ankehitriny.
Fantatra tamin’ny fanadihadiana fa tsy nisy naman’io jiolahy io akory teny Andohatanjona Itaosy fa fomba noentiny hamezivezena ireo polisy izany ary noentiny hitsoahana ihany koa. Voalaza fa mbola mitohy ny fiikarohana ny naman’ireo jiolahy mpanao fakana an-keriny, ankehitriny.
Isan’ireo jiolahy efa nifampitadiavana i Tidakely ary efa nahazoana “mandat d’arrêt” mihitsy ny tenany, ny taona 2014. Araka ny fanazavan’ny BC, nanovaova anarana hatrany ralehilahy nandritra ny asa ratsiny tao anatin’ny taona maro. Nisy nilaza fa maty voatifitra i Tidakely, saingy tsy ilay tena izy anefa izany fa olon-kafa, hoy ny loharanom-baovao. Nohamarinina, araka izany fa ilay jiolahy tompon’antoka tamin’ny fakana an’ilay tovolahy teratany karana Owne Aleck io maty voatifitra, omaly, io.